Tag: Hishiiska | Sagal Radio Services
Turkiga iyo Soomaaliya oo kala saxiixday illaa 10 heshiis
Sagal Radio Services • News Report • June 3, 2016
Dowladdaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa maanta kala saxiixday illaa 10 heshiis kala duwan oo isugu jira ganacsi, maalgashi iyo milateri, iyadoo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan uu cambaareeyay weerarkii maalmo ka hor lagu qaaday Hotel Ambassador.
Faahfaahin ku saabsan qorshaha maamul u sameynta labada gobol ee Sh/dhexe iyo Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • August 9, 2015
Wasiirka Wasaarada Arrimaha gudaha iyo Federalka Cabdraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa soo bandhigay qorshaha maamul u sameynta labada gobol ee Sh/dhexe iyo Hiiraan iyadoo socon doonta geedisocodka maamul u sameynta muddo afar bilood ah. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in tallaabada u horeysa ee maamul u sameynta labada gobol ay tahay kadib marka la saxiixo in maamul loo sameeyo labada gobol in la sameeyo guddi farsamo.
Heshiis Maamul loogu dhisayo Gobollada Dhexe oo lagu saxiixay Muqdisho (SAWIRRO)
Magaalada Muqdisho ayaa lagu saxiixay heshiis maamul KMG ah loogu dhisayo gobollada Gal-guduud iyo Mudug oo ka tirsan gobollada ku yaalla bartamaha Soomaaliya, iyadoo heshiiskaas saxiixiisa ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka kala socday maamullada Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca, laakiin waxaa maqnaa xubnihii matalayay maamulka Ximin iyo Xeeb; inkastoo qoraalkii kasoo baxay madasha shirka uu ka muuqday saxiixa ruux heshiiska ku matalayay Ximan iyo Xeeb.